Home » Buddhism » လုလု နှင့် မျှစ်ကြော် အာလူးဖုတ်ခန်း
အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ သော့ချက်က အောက်နားမှာ ညီမ။ ဒီစနစ်အကြောင်း စာတွေဖတ်ရင်းနဲ့ သိလာရတာ။ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်တော့မဟုတ်။ ဖတ်ရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်းမှ သိလာရတဲ့ အမရဲ့ ပညာရေးပါ။
အောင်မြလေး.. သတ္တိကတော့ မသေး….
ဒီစာတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထဲ.. ထည့်ပေးချင်တာ..။
ပိုစ့်မတင်တာ ကြာပြီဖြစ်သော ပြုံးအန်တီရဲ့ပိုစ့်ကို အားရပါးရ ဖတ်သွားပါကြောင်း
အန်တီပြုံးရဲ့ ဦးခေါင်ကို အစားထိုး လဲလှယ်ပစ်လိုက်ဖို့ စိတ်ကူးမလား။
ဦးခေါင်း/ဦးနှောက် လဲလှယ်တာက အဓိကလား။အတွင်းစိတ် ပြောင်း ယူတာက အဓိကလားလို့ပေါ့။
တိုင်းပြည်ဆိုတာ မိသားစု တစ်စုလိုပဲ ဦးလေး။ ထိပ်စီး အိမ်ထောင်ဦးစီးက စပြီး အတွေးမှားရင် တစ်အိမ်ထောင်လုံးကို ရိုက်ခတ်တာပဲ။ သူများတွေ ဘာတွေးတွေး ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုတာ လက်တွေ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အားလုံးနီးပါး ဟာ ခေတ်စနစ်ရဲ့ သားကောင်တွေဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီ ခေတ်ဆိုတာကို လူများစုက ဖန်တီးခဲ့တာ။ လူများစုရဲ့ သဘောထားဟာ ကျန် လူနည်းစုအပေါ်လည်း ဆိုးဆိုး ရွားရွားဖြစ်စေတာပဲ။
အခုပြုံးရဲ့ပိုစ့်က မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ အယူမှားတွေ အယူသည်းတာတွေကို ပြောတာလို့ ထင်မိတယ်။
မိရိုးဖလာ ဗုဒ်ဓဘာသာဝင် ထက် အများကြီးပိုပါတယ် တီမ။ အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ သော့ချက်ကို သွားနေတယ်။ အဲကွင်းဆက်ကို ဖမ်းမမိကြဘူးနော်။ ဘရိန်းဝပ်မှာ အခရာအကျဆုံး။
မှန်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ လေ့လာတွေးခေါ် လုပ်ကိုင်ခွင့် ဆိုတာ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တုန်းက လွတ်လပ်ခဲ့သလဲ။ ခလေးတစ်ယောက် ၅ နှစ်လောက်ဆို ဘရိန်းဝပ်စပြီ။ အခု ဓမ္မစကူးလ်တွေနဲ့ သာဆိုးသေး။ ဒါတောင် နတ်နဂါး ယုံကြည်မှုတွေ မပါသေးဘူး။
ပြီးတော့လေ ကျန်းဂန်တတ် ဘုန်းကြီးတွေရယ် အစိုးရရယ် ၀င်ဆွေးနွေးမှ ဆိုတာထက် နိုင်ငံရေးပညာရှင် ၀င်ရှင်းမှ ရမှာ။ အဲဒါမျိုးက စာရေးဆရာ မောင်ဝံသ ကို သတိရမိတော့တယ်။ သူသိတယ်။ အဲဒါကို
လက်မခံတာကတော့ လွယ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် — ဆိုတဲ့ စကားလုံးနောက်က အကြောင်းအရင်းက အရေးကြီးပါတယ်။ ခုက ထေရ၀ါဒ ဗုဒ်ဓဘာသာ ကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းလိုရင်း ထက် အာဏာရှင်စနစ် ဖြစ်တည်ပုံ — သွေးကြော — ဘာလို့ ဒီတိုင်းပြည်မှာ သက်ဆိုးရှည်ခဲ့သလဲ — ရခဲ့ရင်ကော ဒေါင်ဒေါင်မြည်ဒီမို ဖြစ်လာမလား — ဘာသာရေးနဲ့ ဘယ်လိုဆက်နွယ်သလဲ — အဲဒါက ရှင်းထုတ်ပြီး ကန့်ကွက်ပြဖို့ ခက်တယ်။
အာလူးဖုတ်ဒဲ့ … လာဂဲ့ ခွက်ဒစ်ပေး
ဟိဟိ ခုလည်း မတတ်တဲ့လူနဲ့ မသိတဲ့လူ အာလူးဖုတ်နေကြတာလေ။ ခွိ
… ဆက်လုပ်ကြ… အခြေခံပညာရေးတန်းမအောင်.. သင်္ချာမတတ်.. သိပ္ပံနားမလည်သူများရဲ့ သြ၀ါဒဆက်နာခံကြ…။
ဘာသာရေးမှာ ခက်သွားတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သူများထက် မြင့်မြတ်သွားတယ် ထင်တာ။ ဥပမာ ဘုန်းဘုန်းတွေကို လှူထားတဲ့ ကျောင်းဆောင်က လွတ်နေတာမို့ ခလေး မူလတန်းကျောင်း လုပ်ဖို့ အလှူခံပါတယ်။ ဆရာတော်တို့အတွက် ဘေးနားမှာ တဲထိုးပေးပါ့မယ်ဆို သူတို့လှူမလား။ ရှိတော့ရှိတယ် ရှားတယ်ပေါ့နော်။
တိုက်ရိုက်ကွင်းဆက်ကတော့.. ထေရ၀ါဒနိုင်ငံတွေအကုန်(အကုန်)… မွဲပြီး.. ပဋိပက္ခအကြီးဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်နေတာနဲ့.. ကြည့်ဆုံးဖြတ်ရင်ရပါတယ်..။
စကားစပ်မိလို့ ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ အရင်က မျှစ်ကြော် ရှန်တိနိကေတန်ကို ခဏခဏ ရောက်တယ်။ ဆရာပါရဂူ ဆိုတာ ဘာသာရေးဆက်နွယ်တဲ့စာအုပ်တွေ ရေးတယ် ပြန်တယ်နော်။ ဒါတောင် ဆရာပါရဂူက ပြောတယ်။ ခြေရာတော်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီးပြောတာပါ။ မြတ်စွာဘုရား မြန်မာပြည်ကို တစ်ခါမှ မကြွခဲ့ဘူးတဲ့။ နောက်တော်ပါ ရဟန်း ၅၀၀ ဆိုတာလည်း မဟုတ်ဘူး မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ ပြီးတော့ သူအများကြီး ပြောသေးတယ်။ အဲဒီမှာ ကျမ စိတ်ထဲဝင်သွားတဲ့ ပထမအတွေးက ဒီဆရာကြီး ဒိဌိ လားဆိုတဲ့ အတွေးပဲ။ တော်တော်လေးလည်း ကြာရော၊ ကျမ သူ့ကို အကြည်ညို ပျက်ချင်လာပါရော။ သူပြောတာကို ဘယ်လိုမှ လက်သင့်ခံလို့ မရခဲ့ဘူး။ အချိန် အရမ်းကြာသွားမှ တဖြည်းဖြည်း လက်သင့်ခံလာနိုင်တာ။ နောက်ပိုင်း မြောက်ကိုရီးယားစာအုပ်တွေ ဖတ်ပြီးချိန်မှာ ဘရိန်းဝပ်ကို ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်သွားတော့တာပဲ။
ထေရာဝါဒကို ဝေဖန်သူတွေကို .. အဲဒီခေတ်တွေက..ဖမ်းပြီး.. ထောင်ချပစ်တယ်..။ နှိမ်တယ်..။ ပိတ်တယ်..။
1984 ကို ဖတ်တော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို မမြင်ဘဲ မြောက်ကိုရီးယားကို ကျော်မြင်မိတယ် . . . ငါတို့နိုင်ငံက တော်ပါသေးတယ်ပေါ့ . . . ဘာသာရေးနဲ့ ဆက်စပ်ကြည့်လိုက်မှပဲ ကိုယ်တွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲလို့ သတိထားမိလိုက်တာ . . .
ဒီပို့စ်ကို အတော်လေး အချိန်ပေးပြီး ဖတ်လိုက်ရတယ်. . . အတွေးတွေ အများင်္ကြီးတော့ ရသွားပါတယ် အစ်မ . . .
ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လတ်တလော ယုံကြည်နေတာကို ပြောရရင် ဝိပသနာပါပဲ . .
အိုဘယ့်.. ထေရာဝါဒတို့ရဲ့.. ဟိန္ဒူကြီးဦးဂိုအင်ကာ… ၀ိပဿနာ..။
ဝိပဿနာဆိုတာ တရားစခန်းဝင်တာကို ဆိုလိုချင်တာ မဟုတ်ဘူးဗျ… စိတ်ကို စူးစိုက်ကြည့်တာ… ဟိုနေ့က မခိုင်ဇာတင်ထားတဲ့ emotional management ဆိုတာမျိုးကို meditation က စလုပ်ကြည့်မှ ရမယ်လို့ (ကိုယ့်ကိုကိုယ်) ထင်နေတာ… ပစ္စပ္ပန်တည့်တည့်ကို ရှုတတ်ဖို့ဆိုတာ ရုတ်တရပ်ကြီးတော့ ရမယ်မထင်ဘူး.. အချိန်တစ်ခုပေးပြီး အာနာပါနလုပ်ကြည့်.. အဲဒီကတစ်ဆင့်မှ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်… အရှိတရားတွေကို မြင်လာမယ်… အမှောင်ဖုံးထားတာကနေ ရုံးထွက်နိုင်မယ် ထင်တာပဲ..
စကားအတင်းစပ်… အနော်လည်း ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့တွေ ဗုဒ္ဓဝင်တွေကို အယုံအကြည်သိပ်မရှိပါဘူး.. ထပ်ပြောရရင် နတ်ပြည်နဲ့ ငရဲတောင် မယုံချင်ဘူး.. ဒါပေမယ့်လည်း မိစ္ဆာဒိဌိဆိုရင် ကမ္ဘာပျက်ရင်တောင် မကျွတ်ဘူးဆိုပြီး အဆုံးပိတ်နဲ့ ခြောက်ထားလိုက်တော့… Freedom from Fear ပါပဲလို့..
တကယ်ပြောရင် အမလည်း ရောချ ပဲ ။ ဘာမှ သိပ်မသိဘူး မွန်မွန်ရေ့။ ကံဆိုတာ စွမ်းအင် လို့ သိမှတ်ဖူးတယ်။ Energy is not created nor destroy. ဆိုတဲ့ လော အရ ကံသတ္တိ ဆိုတာ ကုန်သွားရိုးမရှိ။ ပြောင်းသွားလို့ ရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဘ၀ကံဟာ ချုပ်ငြိမ်းမသွားနိုင်။ နောက်ဘ၀ဆိုတာ ရှိကိုရှိရမယ်။ ဒီလိုမျိုး တွေးခဲ့ဖူးပါ့။ ခုတော့လည်း အင်တာနက်လိုင်းသုံးနေတဲ့အခါ တဖျပ်ဖျပ် သွားနေတဲ့ ရွေ့လျားမှုတွေ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံး မှာသုံးတဲ့ အရွေ့စွမ်းအင် အလေးချိန်က စတော်ဘယ်ရီသီး အရွယ်လောက် ဆိုတော့ လူလည်း ကြောင်ထွက်သွားပြီ။ ဂယ်ပြောတာ။ လိုက်မမီတော့ဘူး။ ဒီလောက်မြန်မှတော့ ဇော ၇ ချက်ဆိုတာလည်း ရှိပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒါ တွေ အသာထား။ ဗုဒ်ဓ ဘာသာတိုင်းပြည်တွေ မဟန်တာတော့ အမှန်ပဲ။
ဘုရားစောင်းတန်း တွေမှာ ရေးပြ ဆုံးမ ထားတဲ့ ဆီပူ ငရဲ ကို မကြောက် ဘဲ (မယုံ လို့ ပေါ့) လက်ရှိ လောကနိဗ္ဗန် အတွက် ခံစားနိုင်ရေး ကိုဘဲ ဦးစားပေးနေတာ မဟုတ်လား။
ကမ္ဘာ့တိုင်းပြည်တွေ တိုးတက်တာ/မတိုးတက်တာ.. ဘာသာရေးကြောင့်လို့ သိမ်းကြုံးမပြောလိုပါဘူး…။
မြန်မာပြည်မှာမှ.. မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်ထေရာဝါဒ(ထေရမဟုတ်) ကိုပြောတာခင်ဗျာ…။
7 Day ထဲ မှာ မဘသ များရဲ့ အမျိုးချစ် သင်ခန်းစာ အကြောင်း ဖတ်ပြီး ဖဘ ထဲက သူငယ်ချင်း နဲ့ ပြောဆိုထားခဲ့တာလေးထဲ က တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း။
အဝေး က လှမ်းအော် နေလို့လဲ ရတယ် လေ ညီမပြုံး ရဲ့။
ဘုန်းကြီး မဟုတ်တာလုပ်လဲ အော်မည်။ သင်းအုပ်ဆရာ မဟုတ်တာလုပ်လဲ အော်မည်။ ဗလီဆရာ မဟုတ်တာလုပ်လဲ အော်မည်။
ငါပိုင် ငါဆိုင် မဟုတ်တာကိုသိနေရမယ်
အပေါ်မှာ အစ်မပြုံး ပြောထားတာတွေက
အစ်မလက်ခံထားတဲ့ အနတ္တ နဲ့ ဆန့် ကျင်ဘက် ဖြစ်နေပါတယ် အယူမှားနေတာပါ
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ အရမ်းကိုနက်နဲတဲ့ ဘာသာပါ
နည်းနည်း ရွှီးလိုက်ဦးမှ- အနတ္တ ဆိုတာက တခြား ဘာသာရေးထဲမှာ မရှိဘူးလေ။ တခြား ဘာသာရေးတွေထဲမှာ အနိစ္စ နဲ့ ဒုက္ခ ပဲရှိတယ်။ အနတ္တကတော့ ဗုဒ်ဓဘာသာမှာပဲ ရှိတယ်။ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်လို့ မရတာ။ အစိုးမရတာ။
ကျုပ်ကတော့ အဲဒီ.. အနတ္တ.. မရှိ/မမြဲ/အစိုးမရတဲ့ဟာကြီးကနေ.. နိဗ္ဗာန်သွားရှာနေတာကိုက.. မှားတယ်လို့.. မြင်တယ်…။
ကျနော့်တင်ထားမိတဲ့ ပိုစ့်တွေ အကုန်ဖျက်ပေးပါ
ခြစ်စိုင်းဆင့်လေးနဲ့ ဦးကြောင် တသဘောထဲရှိတယ်။ မသိလို့ မွပ်ဂဇက်နဲ့ ပက်သက်မိတာ။ အယာတိုလာ ခိုမ်မေနီခင်ဗျား.. ကျုပ်ရေးထားတဲ့ မှက်ခြက်၊ ပို့စ်တွေအားလုံး ဖျက်ပေးပါ။
သဂျီးနဲ့ မျှစ်ကြော် အမြင်ချင်းမတူတာ တော့ အဲဒါ ရှိတယ်။ သဂျီးက နောင်ဘ၀ မယုံဘူး။ မျှစ်ကြော်က ယုံတယ်။ ကံသတ္တိ စွမ်းအင်ကို ချေဖျက်လို့ မရနိုင်ဘူး။ ဗုဒ္ခ၀င်ပုံပြင်တွေ မဟုတ်က ဟုတ်က ဇာချဲ့လွန်းတော့ အဲဒီကနေ နတ် နဂါး ဂဠုန် စတာတွေက အဲဒီကနေ စတာ။ အဲဒီကနေ ဧရာမ အတုပြုလုပ်ခြင်းကြီးလာမယ်။ အဲဒီကနေ ဘရိန်းဝပ်ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည် နစ်တော့တာပဲ။ ပြီးတော့ ဘာသာရေးအမြင်က သိပ်ပြီး ဖြူစင်လွန်းတော့ မည်းလွယ်တာပေါ့။ သိပ်ပြီး အဖြူထည်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတော့ ညစ်လွယ်တာပေါ့။ လူသားတစ်ယောက်အဖြစ် အသက်ရှင် နေထိုင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ သီလတွေ လုံလို့ကို မရဘူး။ ချိုးဖောက်ရမယ်။ ဒါမှ ရှင်သန်မယ်။
ကာယ ဝစီ မနော မည်
ဒေါ်မေအေးဦးထံမှ ကူးယူမျှဝေ ပါသည်။
အဲဒီ ကံ၊ ကံ၏အကျိုးကို ယုံပြီး လက်တွေ့ဘ၀ထဲ ဆွဲထည့်လိုက်ကြလို့ ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူအဟောင်းတွေနဲ့ အသာစီးရသွားတဲ့ သူတွေ ကြိတ်ဟားနေကြတာ။ တပြည်လုံးကို။ ဒီပြည်ကလေ သူတော်ကောင်းတွေ များလွန်းလို့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ လက်တစ်ဖက်ချင်း မျက်လုံးတစ်လုံးချင်း လက်တုံ့ပြန်တတ်တဲ့လူ ရှားတယ် ။ လူများစုရဲ့ သဘောထားအတိုင်း တိုင်းပြည်ဟာ ဖြစ်တည်ပေးလိုက်ရတာပါ။
ဟိ .. ပျား အုံ တော့ ဒုတ် နဲ့ ထိုး လိုက်ပြီ
သူ ကြီး ထိပ် တက် ကပ်ဘူး လား ..
ခုတောင် ၀င်ဖတ်တဲ့လူတွေ များလို့။ ဖဘကနေ မေးနေတဲ့လူတွေလည်း ရှိတယ်။ ဆရာတစ်ယောက်ကတော့ ကျမကို ဘွဲ့ တစ်ခု ပေးလိုက်ပြီ။ တစ်ခြမ်းရူး တဲ့။
ဒီရက်ပိုင်းတွေက.. မြန်မာအစိုးရထဲကသူတွေ တက်ဖတ်နေမယ်ထင်တာပဲ..။
သိစေ.သိစေ.. သိကြစေ..။ ဆဲကြစေ…။
ဘုရားရှိခိုးဆုတောင်းတာကို ရှက်စရာလို့လည်း သဘောထားသင့်ပါတယ်။ ဘုရားကို အားကိုးတာ မဖြစ်သင့်ဘူး။ လူသားတန်ဖိုးကျတယ်။ မတတ်သာလို့ ဆုတောင်းရင်လည်း အနည်းဆုံးကို တောင်းသင့်ပါတယ်။ ဟို မေတ္တာပို့ အမျှဝေ ကြီးက ဘယ်လိုမှကို အဓိပ်ပါယ် ရှာမရဘူး။ လုံးစုံများစွာ သတ္တ၀ါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ ဆိုတာလေ။ ဘယ်လိုလုပ် ဖြစ်နိုင်မှာတုန်း။ တစ်ကောင့် တစ်ကောင် စားသောက်နေထိုင်ရတဲ့ လောကကြီးမှာ။ မြန်မာတွေ စားတဲ့လူမှာ အပြစ်မရှိဘူးပြောတယ်။ ဒါဆို ကြက်ကို လည်လှီးသား စားလေ။ ဒါကျတော့ မစားဘူး။ လည်လှီးသားက အသားတွေ ဖြူရော် နေတယ်။ အသားလှအောင် ကြက်ကို အရှင်လတ်လတ် ခြေနှစ်ချောင်းကကိုင်ပြီး ရေနွေးထဲထည့်နှစ်သတ်တဲ့ ကြက်မှ စားကြတယ်။ အဲ့လို။ သတ္တ၀ါကို သက်သက်သာသာ သေအောင် လုပ်ခွင့်မရှိဘူး။ ပြီးတော့ ငါးပါးသီလ ကြေငြာတယ်။ ဘာလို့များ အကုသိုလ် ကုသိုလ်ကို တရားမျှတတ မယူကြတာလဲ။ ငရဲရမယ်ဆိုရင် ငရဲကို မျှမျှတတ ဝေခွဲ ယူရမှာပေါ့။
ဟေဟေး . . . အဲဒီမှာ တွေ့တာပဲံ . . . ဟိုဘာသာတရားမှာ လည်လှီးတယ်ဆိုတာ သတ္တဝါတွေကို ခံစားမှုအနည်းဆုံးနဲ့ သေစေချင်တာကြောင့်ရယ် . . . နောက် မူလအစက အပူပိုင်းဒေသဆိုတော့ လည်လှီးမှ သွေးကတစ်ဆင့် ပိုးတွေပါသွားမယ် ဆိုတာကြောင့်ရယ်လို့ မှတ်ထားဖူးတယ်. . . သူတို့လည်း အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကြောင့် ဘရိန်းဝက်ခံကြရတာပဲ . . . ဟိ. .
ဂျပန်မှာ.. တူနာ(မာဂုရိုး) ဖမ်းရင်.. ဖမ်းတဲ့သင်္ဘောတွေမှာ.. မိတာနဲ့.. ခေါင်းဖြတ်.. တွဲလောင်းဆွဲ.. သွေးတွေထုတ်ပစ်ပြီးမှ.. အရမ်းအေးတဲ့ဓတ်ငွေ့နဲ့.. အေးခဲပစ်တယ်..။
အဲဒီ တစ်ချက်တည်းနဲ့တင် ဒီဘာသာရေးဟာ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာ သေချာသွားလို့ BC ပေးတာပါ ကိုဥာဏ်ကောင်းရေ
ညီမ ပြုံး ရေ
မြန်မာပြည် ထဲ မှာ အဖွဲအစည်း တစ်ခုခု ကို ပြောဆိုဝေဖန်ကြ ရင် ဝါလုံးရှည် နဲ့ ရမ်းတတ်ကြတယ် ဆိုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ အရိပ်ကြီး ရှိနေပါတယ်။
ညီမပြုံး အကြောက်တရား အတွက် ငရဲ မပါတဲ့ တရားပါ။
သူကြီးတို့ ဆရာမပြုံးတို့ စသည်တို့က သူ့အမြင်သူ့အတွေးနဲ့သူပါ..၊
မြန်မာပြည် မှာ တကဲ့ သူခိုးကြီး တွေ ထင်းထင်း ရှိနေတာ ကို မြင်နေရတဲ့ အချိန်
စိတ်ဝင်စားပါတယ် ဦးပါ။ အဲဒီ ဘုန်းကြီးအကြောင်း မသိသေးဘူး။ ဦးရွှေအောင်တို့ ။ ဦးဌေးလှိုင် တို့ရေးတာတွေတော့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ တစ်ဘ၀သာသနာ ဖတ်ဖူးတယ်။ ကျမ ပြဿနာက အင်္ဂလိပ်ပိုင်းစာအုပ်တွေထဲမှာ အာဏာရှင်စနစ် အကြောင်း ဖတ်ခဲ့ဖူးတာပါပဲ။ ပြီးတော့ ငယ်ငယ်က မာ့စ်တွေ ဘာတွေ ခိုးဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အမေက လွှင့်ပစ်လိုက်လို့ စာတော့ မကျေ။ မြောက်ကိုရီးယားအကြောင်း အခွင့်ရတိုင်း လေ့လာပါတယ်။ အတ္တဟိ အတ္တနော နာထော – မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာ ဆိုတာ မြောက်ကိုရီးယား ရဲ့ ဆောင်ပုဒ် ဖြစ်နေပါတယ်။
အဲဒီဆရာတော်ရဲ့ စာတွေ အများကြီး မဖတ်ဘူးပေမယ့် ၂ ချက်ထဲနဲ့တင် မတိုက်ဆိုင်တာနဲ့ လိုက်မဖတ်ကြည့်တော့တာ…
ကြိုဆိုပါတယ် ဦးနှောက်ကနေ စလှန်၇မှာ။
ဘာသာရေးး ကို ဒါးးထမ်းး ဆွေးနွေးးဂျပါဇို့..!!
အလွတ်သဘောဝင်ရန်စရရင် ….. အဲလေ ဆွေးနွေးရရင်
မဝင့်လဲ မဝင့်အပြစ်ပြောနေတဲ့ ဗုဒဘာသာတွေလို အစွန်းရောက်တာပဲ
ကျနော်ကတော့ကြက်အုတွေ့ရင် အစရှာနေမယ့်အစား ကျော်စားလိုက်တာပဲ
အဲ့တော့ မဝင့်လဲရှိတဲ့အုကြော်စား အဲလေ.. နှာသီးဖျားက ဝင်လေထွက်လေလေး အရင်မှတ် ကိုယ်ဘာစိတ်အာရုံညွတ်နေလဲတွေးကျိ…
ဟုတ်ပြီလေ။ ဒါပေမယ့် ၀ိပဿနာမှတ်လို့ တရားတွေ့ရင် – ဖြစ်ပျက်မြင်ရင် ဘာဖြစ်လို့ သူများကို အမှန် အတိုင်း ပြောခွင့်မရှိတာလဲ။ တွေ့ရင်တောင် တွေ့တယ် မပြောရဘူး ဆိုတာ မုသာဝါဒ မှုတ်ဘူးလား။
မဝင့်ကို တွေ့ရင်တွေ့တယ်မပြောရဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလဲ။
ဆိုတော့ အမှားကြာ အမှန်ဖြစ်ဆိုသလို illusion တွေကို ကိုယ့်ပါးစပ်ကထုတ်ပြောရင်းနဲ့ ကိုယ့်စိတ်က အမှန်လို့ထင်လာတတ်သလို ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေ အဖို့လဲထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်တတ်တယ်။
Wowမမက.. တရား ၀င်ဆွေးနွေးရေးနေလို့..အံ့သြနေတာ..။
ဒဂျီးနောက်တစ်ခေါက်လာရင် ဂဒုံးတုံးပြီး camp သွင်းမလို့…
ယူအက်စ်မှာတော့.. ဂတုံးskinhead တွေဂိုဏ်းက … ကြောက်စရာ…။
Camp ထဲများနေမယ်ဆို.. ပိုဆိုးသေး…။
..ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့လေ….ဒီရွာကလူတွေက လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့​လစ်ဘရယ်အမြင်ရှိနေလို့ …ပြီးတော့ ..အစစ်အမှန်ဘာသာရေးကိုသိနေလို့
ဘယ့်နှာ ချောတောငေါ့ပြီး.. ကမ္ဘာနဲ့လာကိုင်ပေါက်နေသလဲ.. အရီးလတ်ရယ်..။
..တားတားပေးချင်တဲ့မက်ဆေ့နဲ့ နဲနဲလွဲနေပုံရတယ်..အရီးလေးရယ်… ကျော်တို့ ခံစားရတယ်..မလုံခြုံဘူး ဆိုတာကိုသိစေယုံပါ..ကောင်းသည်ဆိုးသည်ဝေဖန်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိသလို..မဝေဖန်ရဲပါဘူး…
ကိုယ်တိုင် ခံစား ခဲ့ရပါရောလား မောင်စော ရယ်။
တိုင်းပြည် တစ်ခု မှာ ပြည်နယ်တိုင်း မကျန် မြို့ရွာ မကျန် လူတန်းစား တိုင်း အခြေခံ လူနေမှုစနစ် တော့ အာမခံခွင့် ရဖို့ စနစ်ပြောင်းဖို့ လိုကြောင်း တတ်နိုင်သမျှ (ကြောက်ကြောက် နဲ့) ပြောခဲ့တာပါ။
ဒီအတွက်လဲ စနစ်ကောင်း တစ်ခု ကို ပြောင်းပေးနိုင်မယ်လို့ အကြွင်းမဲ့ ယုံ တဲ့ အမျိုးသမီးကြီး လက်ထဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရအောင် ဝိုင်းပေးခဲ့ကြတာ မဟုတ်လား။
အခုဒီနှစ်ပိုင်းထဲပဲ.. ဘုန်းကြီးတွေအလုပ်ပြုတ်.. လူထွက်ကုန်တာ.. ၁သိန်းကျော်တယ်တဲ့..။
ဆက်တွန်း.. ဆက်တွန်း…. ကျိန်စာလွတ်အောင်ဆက်တွန်းကြ..။
သူကြီး ပြောနေတာ ဒီ ဘုန်းကြီး တွေ ဆီမှာဘဲ အမြဲ တမ်း ဘဲ လမ်းဆုံးတယ်။
စားရ မချောင်ချိန် ဘယ်သူမှ အဲဒီ ယူနီဖောင်း မဝတ်ဘူး သူကြီး ရေ။
အစ္စလာမ် အစွန်းရောက် အာဏာရှင်ကရော သူကြီးမင်းရှင့်။
တကယ်တော့ မြန်မာပြည် ထဲ မှာ မောင်စော ပြောသလို အကြောက်တရား ခံစားပြီး မလုံခြုံမှု တွေ နဲ့ နေနေ ရတဲ့ ပညာရှင် တွေ အများကြီးပါ။
ကျန်တာတော့ ဆက်မပြောလို..။ တော်ကြာ.. ကားမောင်းရင် သေနေဦးမယ်..။
အစ္စလာမ်မစ် တိုင်းပြည်ထဲက အာဖဂန် နစ္စတန် ကိစ္စချောသွားတာ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တာ အဓိကပါပဲ။ အမေ၇ိကန်တွေက လက်နက်တပ်ပေးခဲ့မိတဲ့ အမှားရှိခဲ့ပေမယ့် တကယ့်လက်သည်အစစ်က ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တာပါ။ ကျန်တဲ့ အစ္စလာမ်မစ် တိုင်းပြည်တွေမှာလည်း ဒီမိုရဲ့ အရသာ စစ်စစ် ရှိကိုမရှိပါဘူး။ အင်မတန် ချမ်းသာတဲ့ အစ္စလာမ် တိုင်းပြည် တွေထဲ ဒီမိုအရသာ စစ်စစ် ရှိရင် လက်တစ်ဖက်စာ မပြည့်ဘူး။
Now … your turn my dear! :-)))))
ပြောစရာမရှိ… ဒီရွာမှာ တောက်လျှောက်ရေးခဲ့တာချည်းဖြစ်ပါ၏။
လူလောကအကြောင်း.. လူမှုဆက်ဆံရေးတွေအကြောင်း.. သိနားလည်သွားမယ်လို့… ထင်မိပါ၏..ထင်ပါ၏။။
ဘုရား၊ဘုရား.. လူပျိုဘုရား.. မရှိ…တဲ့..။ ဗုဒ္ဓတို့ရဲ့.. ဥပဒေသ…။
ခရစ်ယာန် ဘာသာထဲမှာ တရားဟောဆရာများ မိန်းမယူလို့ ရတာ ရှိသလို၊ ယူလို့ မရတာလဲ ရှိပါတယ်။
ကျေးဇူးပါ အရီးလာဘ်၊ အခုဆွေးနွေးချက်လေးက ကိုးကားဆရာ အသိအမြင် ပွားစေတယ်။ ကြော်အရီးလာဘ်ကို ကြောင်ခမ လျှာထူး ပေးအပ်လိုက်ပါပြီ။ ငါကွ…
နောင်ဘဝဆိုတာ မယုံရင် Animal Planet နဲ့ Net Geo ကြည့် ကံကံ၏ အကျိုးလည်း အဲ့ထဲပါတယ် ….
တခုခု လွဲနေသလို ခံစားရတယ် အရီးလတ် …. တကယ်ပါ